Lokhu kube ukufika eSpain kwemakethe yase-Italy i-Ventis | Amadoda anesitayela
Amadoda aSitayela | 02/11/2021 11:20 | Kubuyekezwe ku- 04/11/2021 20:11 | imfashini, Amathrendi
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ubuchwepheshe baseSpain kanye nenkampani yokubonisana ngedijithali iMaking Science yathenga iVentis, imakethe edumile yase-Italy. Ku-realidad, le nkundla isivele isivele isebenza ngokugcwele eSpain.
Kulesi sihloko sikulethela zonke izihluthulelo mayelana nokutholwa kwale ndawo yemakethe ngokwenza iSayensi nokuthi ngempela iquketheni. I-Ventis.
Iqiniso yilokho sibhekene nenye yezimakethe zase-Europe eziphelele kakhulu. I-Ventis ithengisa zonke izinhlobo zendatshana ezivela emkhakheni wemfashini, ikhaya kanye ne-gastronomy. Kule nkundla ungathola izindatshana ezivela ezinkampanini eziphambili zase-Italy kodwa nakwamanye amazwe aseSpain, eMelika, eFrance nakwamanye amazwe.
I-Ventis yasungulwa ngo-2016 futhi ibiyingxenye yeqembu le-ICCREA kule minyaka emihlanu, elinye lamaqembu ezezimali atholakala kakhulu e-Italy. Ngalesi sikhathi, imakethe izenzele yona njengengosi yereferensi mayelana nokuthenga ku-inthanethi kumakhasimende ase-Italy kanye nalabo abavela kwamanye amazwe.
Eqinisweni, ngonyaka owedlule ka-2020, naphezu kwalolu bhubhane, iVentis yazuza inzuzo eyizigidi eziyi-14 zama-euro, ngokwengxenye ngenxa yohlelo lwayo lokwethembeka olusekelwe emakethe, lapho kuhlomule khona imikhiqizo efana neDiners Club noma iSky Italia. .
Uma kukhona okusicacelayo, kusuke kunjalo Imfashini nokuhlobisa kwase-Italy kufana nobuhle. Eminye yemikhiqizo eyaziwa kakhulu kuleli i-Diesel, i-Armani, i-Roberto Cavalli noma i-Moschino. Yonke le mikhiqizo inikela ngezingubo zayo nezinto ngeVentis kumakhasimende emhlabeni jikelele. Ngaphezu kwalokho, kule nkundla ungathola neminye imikhiqizo ethengiswa kakhulu nedumile njengeGuess, The North Face, Ralph Lauren, Puma noma Adidas.
Ukuqinisekisa ukuthi kungenzeka ukuthola izindaba nokunikezwa okukhethekile, nsuku zonke ochwepheshe be-Ventis bahlaziya okunikezwayo okuhlukile kwemikhiqizo abavale ngayo izivumelwano zezentengiselwano bese ukhetha imikhiqizo ehamba phambili. Ngakho, bakwazi ukudala ikhathalogi yemikhiqizo eminingi yezihloko nezingubo ngamanani ancintisana kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, iVentis futhi iyinkundla ekahle yokuthenga iwayini lase-Italy. Esigabeni "Gourmet" singathola a Izinhlobonhlobo ezinkulu zemikhiqizo ye-gastronomic kanye ne-oenological efana namawayini, amafutha, ama-liqueurs, i-pasta kanye nemikhiqizo ye-pantry. Lesi isigaba esithakazelisa kakhulu sabo bonke abathanda imikhiqizo enelebula "eyenziwe e-Italy".
Ngamafuphi, ku-Ventis ungathenga cishe yonke into, kusukela ezimpahleni ezivela ezinkampanini ezaziwa kakhulu kuya ezintweni zikagesi, amathawula, ifenisha yasengadini, iwayini nezinongo. Yini enye, Labo bantu abathenga njalo kule portal bazojabulela izimo ezikhethekile.
Isibonelo, wonke amakhasimende asebenzisa ngaphezulu kuka-€ 1.000 kuphothali ungakapheli unyaka azojabulela amathuba okuthunyelwa kwamahhala unyaka wonke. Bazothola nevawusha yesaphulelo ka-€ 50 futhi bangenza izimbuyiselo ezimbili zamahhala.
Kusho ukuthini ukufika kwe-Ventis emakethe yaseSpain?
Siyabonga ngokufika kweVentis eSpain, Kulindeleke ukuthi izinhlobo ezintsha zaseSpain nazo ziqale ukuhlinzeka ngemikhiqizo yazo ngale nkundla.. Ngokuka-José Antonio Martínez Aguilar, oyi-CEO ye-Making Science, lesi sinyathelo esisha sokuqhubekela phambili abasithathile sizobavumela ukuthi babe khona engxenyeni ebalulekile ye-value chain futhi bakwazi ukunikeza ama-Spanish brand ithuba lokuthumela imikhiqizo yabo kwamanye amazwe. emakethe ngokusebenzisa i-Ventis.
Kuwo wonke umlando weminyaka emihlanu kaVentis, inkundla ikwazile ukuthola izinkulungwane zezinkampani zase-Italy ukuthi zizenze zaziwe kwamanye amazwe. Ngale ndlela, imakethe ayisizi nje kuphela abantu ukuthi bathenge kalula futhi ngokunethezeka, kodwa futhi ihlinzeka ngemikhiqizo abasebenzisana nayo ithuba lokukhulisa amabhizinisi abo ngaphandle kwemingcele yabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Lokhu kube ukufika eSpain kwemakethe yase-Italy iVentis